Etu esi emepụta Designphics na DesignCap nke enwere ike iji ya na Social Media ma ọ bụ weebụsaịtị na nha dị iche iche
Mọnde, Jenụwarị 13, 2020 Mọnde, Jenụwarị 13, 2020 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 4 nkeji Obi abụọ adịghị ya na ị nwere ike itinyekwu ndị na-eso ụzọ na ndị debanyere aha maka mgbasa ozi gị na ọkọlọtọ mgbasa ozi mara mma ma ọ bụ na ị nwere ike ịdọta ọtụtụ ndị ọbịa na webụsaịtị gị site na iji ihe osise mara mma. DesignCap bụ ngwa ọrụ dị ịtụnanya nke na-enye gị ohere ịgbanwe onyonyo dị mfe nghọta na mma foto mara mma. Ishchọ ngwá ọrụ a, ị nwere ike ịmepụta eserese maka mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ọdịnaya weebụsaịtị na nha dị iche. Ka anyị hụ otú
DesignCap: Mee Mpempe Akwụkwọ ma ọ bụ Akwụkwọ ntanetị na ntanetị
Tuesday, January 15, 2019 Saturday, January 19, 2019 Douglas Karr
Ịgụ Oge: <1 nkeji Y’oburu n’icho ihe di nkpa ichoputa ihe ngosi di nma ma obu mma poster lelee DesignCap. Ọ bụghị onye ọ bụla bụ onye na-ese foto ma ọ bụ nwee ohere ị ga-ahụ onye na-ese ihe nkiri, yabụ nyiwe dị ka nke a bara ezigbo uru. Na DesignCap, ị nwere ike ịmalite site na ịhọrọ template ịchọrọ ma tinye, wepu, ma ọ bụ mezie ihe ọ bụla nke clipart nke ejiri ya rụọ ma ọ bụ na ị nwere ike ịchọta na nhọrọ ha n'ịntanetị.